Izicelo zezikolo zeziphumo eziphumeleleyo zihamba kunye neqela, ngokuqhelekileyo zintathu, iileta zinconywa . Uninzi lwabafundi bakho abathweswe iziqu ziya kubhalwa ngabafundisi bakho. Iincwadi ezilungileyo kakhulu zibhaliwe ngabaprofesa abazi kakuhle kakuhle kwaye banokubuyisela amandla akho kunye nesithembiso sokufunda ngokugqibeleleyo. Ngezantsi umzekelo wee- letters zinconywa zinconywa zokungeniswa esikolweni .
Iibhokisi zinconyiso eziphumelelayo ziquka, ubuncinci:
Ingcaciso yomxholo apho umfundi eyaziwayo (eklasini, ukucebisa, uphando, njl.).
Iinkcukacha zokuxhasa ukuhlolwa. Kutheni umfundi efanelekileyo ukubheja? Yintoni ebonisa ukuba uya kuba ngumfundi ophumelelayo kwaye ekugqibeleni, uqeqesho? Ileta enganikezeli iinkcukacha zokuxhasa iingxelo malunga nomviwa ayinakunceda.
Kwakhona ubone le ncwadana yeempendulo zengcebiso .
Ngezantsi itemplate kukukunceda ukuhlela iingcamango zakho njengoko ubhala ileta yomfundi yesinconywa . Izihloko zecandelo / iinkcazo ziseburhulumenteni [ungazibandakanyi oku kwileta yakho].
Ukuqwalasela: iKomidi yokwamkelwa [ukuba unxibelelwano oluthile lunikezelwa, idilesi njengoko ichazwe]
Ndibhalela kuwe ngokuxhasa [igama elipheleleyo lomfundi] kunye [nomnqweno] wokuya kwigama [kwiYunivesithi] yeprogram [yesiGaba seNkqubo]. Nangona abafundi abaninzi bandibuza ukuba ndenze le sicelo egameni labo, ndincoma kuphela abafundi abavakalelwa ukuba bafanelekile kwinkqubo abazikhethelayo.
[Igama lomfundi elipheleleyo] ngenye yezo bafundi. Ndincoma kakhulu, ndincoma ngaphandle kokungabaza - ngokufanelekileyo] [yena / yena] unikwe ithuba lokuya eyunivesithi.
Umxholo Oyaziyo Umfundi
NjengoNjingalwazi weBiology kwiSixeko saseYunivesithi, kwiminyaka eyi-X, ndidibene nabafundi abaninzi eklasini yam kunye nelebhu [ukuhlela ngendlela efanele].
Abafundi abancinci kuphela abanikezelayo banikela ngembono oyingqayizivele kwaye bayamkela ngokwenene ukufunda kwabo kwimiba. [Igama lomfundi] liye labonisa ngokuqinisekileyo isithembiso nokuzinikela, njengoko kuboniswe ngezantsi.
Ndaqala ukudibanisa i-StudentName kwisikolo sam [Isihloko seKlasi] ngexesha le-semester [yoNyaka neNyaka]. Ukuthelekisa kumyinge weklasini [weMigangatho yemiGangatho], [Mr./Ms. Igama lokugqibela] lafumana [iBanga] kwiklasi. [Mnu/M. Igama lokugqibela] lihlolwe [kwizichazi zamabanga, umzekelo, iimviwo, amaphepha, njl.], Apho [yena / yena] wenza ngokufanelekileyo.
Bonisa umzekelo woPhumelelo lwabaFundi
Nangona uMfundi weNkcazo uye wahlala edlulileyo kuyo yonke imimandla yeklasi yakhe, umzekelo omhle wesithembiso [sakhe] uboniswe [kwiphepha / ingxelo / iprojekthi / njl.] Kwisihloko [somsebenzi]. Lo msebenzi ubonise ngokucacileyo amandla akhe okunikela ngokucacileyo, okucacileyo kunye neengcamango ezicatshulwa kakuhle ngombono omtsha ngokubonakalisa .... [fakela apha].
[Nika imizekelo eyongezelelweyo, ngokufanelekileyo. Imizekelo ebonisa amakhono ophando kunye neminqweno, kwakunye neendlela osebenze ngokusondeleyo nomfundi zixhamle ngakumbi. Eli candelo liyinxalenye ebalulekileyo yileta yakho. Yintoni umfundi wakho anokufaka isandla kwiprogram yezifundo kunye nabaprofesa abanokusebenza nabo?
Kutheni ekhethekileyo - ngenkxaso?]
UmfundiName uyaqhubeka ndigxininisa ngolwazi [lwakhe], ubuchule nokuzinikela emsebenzini [wakhe]. Ndiqinisekile ukuba uya kufumana ukuba ngumfundi okhuthazayo, owaziyo, ozinikeleyo oya kukhula waba ngumphathi ophumeleleyo [ukuhlela ngokufanelekileyo-bonisa ukuba kutheni]. Ekuvaleni, ndincoma kakhulu (ndincoma ngaphandle kokugcinwa; ngcebiso e phezulu; ukongeza njengoko kufanelekileyo] Igama elipheleleyo lomfundi lokungeniswa kwi-[Iiprogram Graduate Programme] kwi [Yunivesithi]. Nceda ukhululeke ukudibana nam ukuba ufuna ulwazi olungakumbi.
Iileta zenkxaso zibhalwa nomfundi othile engqondweni. Akukho ncwadana yokunconywa kwee-grad zesikolo . Khawuqwalasele ngasentla njengesikhokelo malunga nolwazi olubandakanya ukubhala njengoko ubhala iileta zinconywa kodwa ulungiselela umxholo, inhlangano kunye neetoni zomfundi othile.
Ileta yesincomo yeSampula yeSikolo seSikolo esiPhezulu
Ngaba Ufanele Ukubhala Ileta Yakho Yenkxaso Yesikolo?
Indlela yokusebenzisa kwakhona ukuphindaphinda ukuphuhlisa imihlathi ephumelelayo
Iimfanelo zeJupiter - iKhadikhadi, iFixed, okanye i-Mutable
"Ritorna vincitor" Iingoma kunye nokuguqulelwa kwetekisi
Imfazwe ka-1812: Omkhulu Jikelele uSir Isaac Brock
Imbali ye Microscope